Umfula omude kunayo yonke emhlabeni: impikiswano phakathi kweNayile ne-Amazon | Ukuhamba kwe-Absolut
Umfula omude kunayo yonke emhlabeni
Umfula omude kunayo yonke emhlabeni mhlawumbe akusiwo sonke esicabanga ngawo lapho sibuzwa lowo mbuzo. Noma, okungenani, akuyona yodwa. Ngoba isayensi ayiqedi ukuvuma ngakho, ngisho nangezindlela okufanele zilandelwe ukunquma.
Impela, uma kufanele usho ukuthi yimuphi umfula omude kunayo yonke emhlabeni, ungakhomba Amazon. Futhi ubungeke ube nephutha ngokuphelele. Kodwa-ke, ingxenye enhle yochwepheshe, esekwe kwezinye izici, ingakutshela ukuthi yi- INayile. Into enelukuluku kakhulu ukuthi sonke sizobe silungile. Kuya ngokuthi yiziphi izindlela esizisekela kuzo.
1 Indlela yokunquma ukuthi yimuphi umfula omude kunayo yonke emhlabeni
2 Umfula iNayile, omude kunayo yonke emhlabeni ngobude
2.1 IChibi iVictoria
2.2 Idamu i-Aswan
2.3 Idolobha lasendulo laseMeroe
2.4 Isigodi Samakhosi
3 I-Amazon, umfula omkhulu kunayo yonke emhlabeni ngokugeleza kwamanzi
3.2 Iquitos, i-Amazon yasePeru
3.3 IManaus, inhlokodolobha yama-Amazonas
3.4 Belém, ukungena e-Amazon
Indlela yokunquma ukuthi yimuphi umfula omude kunayo yonke emhlabeni
Ngokuyinhloko, kungabonakala kulula ukuthola ubukhulu bomfula. Kungwenela ukuthatha iphuzu layo lokuzalwa nomlomo walo bese ulinganisa ibanga. Kodwa-ke, akulula ngisho nokubeka leyo mikhawulo engokomzimba. khona imifelandawonye ejoyinayo ukwakha isiteshi esisodwa. Ngakho-ke, kunzima ukukhombisa ukuthi umfula uqala kuphi ngqo.
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi abanye ochwepheshe bethembele kwisilinganiso se- ubude, abanye bakwenza ngokubheka ukugeleza kwalo. Okungukuthi, kumamitha ayi-cubic wamanzi awathululela olwandle. Empeleni, uma kutholakala ukuthi yimuphi umfula omude kunayo yonke emhlabeni, umbandela wokuqala ubonakala unokwethenjelwa. Kodwa-ke, isayensi iyavuma kokubili.
Ngakho-ke, okungcono kakhulu esingakwenza ukukunikeza yonke idatha maqondana nemifula emibili eshiwo ukuze ukwazi ukwakha owakho umbono. Futhi, ngokusobala, ngoba sibhekana nokuhamba ku web, sizokukhombisa ezinye zezindawo ezinhle kakhulu abawelayo.
Umfula iNayile, omude kunayo yonke emhlabeni ngobude
Njengoba sakutshela ngaphambili, ukuthi iNayile yazalelwa kuphi ayicaci. Kuyaziwa ukwenza kanjalo ku- entshonalanga tanzania futhi ochwepheshe abaningi babeka umsuka wayo ku- ichibi victoria. Kepha njengoba amanzi aleli chibi elikhulu ahlinzekwa yimifula, kukhona ososayensi abathola umthombo weNayile Umfula iKagera, umsele wawo omkhulu kunayo yonke.
Le nkinga ibalulekile ngoba, okokuqala, umfula omkhulu wase-Afrika ubuzoba nobude be- 6650 amakhilomitha. Kodwa-ke, kwesibili, okungukuthi, uma iKagera ithathwa njengendawo yokuzalwa, ibizohamba 6853 amakhilomitha.
Ukuqedela izinto eziyinkimbinkimbi, le colossus yomfula inamagatsha amabili. Okokuqala ucingo INayile emhlophe, izwe lakhe lokuzalwa elizoba Rwanda nokuthi izonqamula esifundeni seLwandle Olukhulu. Ngokwengxenye yayo, owesibili kungaba yi IBlue Nile, ezalwa ku- ichibi tana, enkulu kunazo zonke Ethiopia, bese edlula Sudan ukujoyina eyokuqala eduze kwenhlokodolobha yaleli zwe, IKhartoum.
Ekugcineni, ithululela eningizimu-mpumalanga yoLwandle iMedithera yakha lokho okuthiwa INayile Delta ngemuva kokudlula emazweni ayishumi. Kepha ngaphezu kwalokho, umfula wase-Afrika unokugeleza okuncane kune-Amazon. Lokhu kuletha isilinganiso sama-cubic metres ayi-200 olwandle i-Atlantic Ocean, kanti iNile ithwala amanzi amaningi izikhathi ezingamashumi ayisithupha ngaphansi. Futhi i-Amazon nayo ibanzi, ngoba ezindaweni zayo ezibanzi ifinyelela amakhilomitha ayishumi nanye ububanzi.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba besikuthembisile, sizokweluleka ngezinye ze- izindawo ezinhle kakhulu ongavakashela osebeni loMfula iNayile.
Ngamakhilomitha-skwele ayo acishe abe yizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, iyichibi lesibili ngobukhulu emhlabeni ngemuva kweSuperior, e Canada. Ogwini lwayo kufaka nezizwe ezintathu: Tanzania, Uganda y Kenya futhi uthola igama layo endlovukazi Ukunqoba kweNgilandi.
Ngokwandiswa okunjalo, kunengqondo ukuthi inezimangaliso zemvelo. Ukukunikeza isibonelo, sizokhuluma nge- IMpophoma iMurchison noma iKabalega, engeye-Uganda futhi evuse ipaki kazwelonke. Empeleni ziqoqo lezimpophoma ezintathu ezinkulu ezifinyelela kumamitha angamashumi amane nantathu ubude.
Yize kungesona isikhumbuzo semvelo, sikhuluma ngaleli damu ngenxa yokubaluleka kwalo okuyinhloko esiteshini seNayile. phezulu nabaphansi. Kepha okumangalisa kakhulu ngeyokuqala, eyakhiwe emashumini amahlanu eminyaka yekhulu elidlule.
Kungumsebenzi omkhulu wobunjiniyela owenziwa ukuvimbela umfula ukuba ugcwale. Usayizi wayo omkhulu uzokunikeza umbono weqiniso wokuthi ulinganisa cishe amakhilomitha amane ubude y icishe ibe yikhulu neshumi. Ngokuqondene nokushuba kwesisekelo salo, kunjalo cishe ikhilomitha.
Ukuze zingalahleki, izikhumbuzo eziningi ezazisendaweni kwakufanele zisuswe ngaphambi kokuba kwenziwe umsebenzi. Phakathi kwabo, i- Ithempeli le-Debod, idluliselwe eMadrid. Kodwa futhi lezo zikaRamses II noDendur, bayiswa eKhartoum naseNew York ngokulandelana.
Idolobha lasendulo laseMeroe
Kutholakala ku- Sudan, kwakuyinhloko-dolobha ye- Umbuso waseKush, omunye wababili abakha endala I-Nubia. Ubukhona bayo buhlehlela emuva ekhulwini lesi-350 BC, kepha labhujiswa cishe ngonyaka ka-XNUMX AD. Noma kunjalo, izinsalela zodonga ziyagcinwa, i isigodlo sasebukhosini, the ithempeli elikhulu lika-Amun nezinye izingane. Akumangalisi njengezindawo zaseGibhithe esizokhuluma ngazo ngokulandelayo, kepha ine- inani elikhulu lemivubukulo.
Futhi osebeni lweNayile kukhona ezinye zezikhumbuzo ezibaluleke kakhulu emhlabeni: lezo zaseGibhithe lasendulo. Phakathi kwalezi, lezo ezisesiGodini saMakhosi ziyagqama, nazo ezakha ne Ama-archaic thebes isethi emenyezelwe Amagugu Emhlaba.
Lesi sigodi sakhiwe ngamathuna onkulunkulu abahlukahlukene boMbuso Omusha futhi eduze kwabo kunendawo enhle kakhulu amathempeli eLuxor naseKarnak, kanye nalokho okuthiwa Isigodi seQueens, ngamathuna alaba ambiwa emadwaleni. Ngaphandle kokungabaza, ingelinye lamaqoqo amakhulu amangalisayo osebeni lweNayile, lapho ungabona khona ezinye izimangaliso eziningi, kepha manje sesizogxila e-Amazon.
I-Amazon, umfula omkhulu kunayo yonke emhlabeni ngokugeleza kwamanzi
Ngokwengxenye yayo, i-Amazon imfushane kancane kuneNayile.Kodwa ubude bayo bungaphikisana. Abadwebi bamabalazwe be-hydrographic ngokwabo abavumelani nalokhu.
Ngokwe-United States National Park Service, i-Amazon inobude be- 6400 amakhilomitha. Kodwa-ke, iBrazil Institute of Geography and Statistics yashicilela ucwaningo eminyakeni eminingana edlule lapho yathi khona lo mfula omkhulu uvela eningizimu yePeru hhayi enyakatho, njengoba kwakulinganiselwa kuze kube yileso sikhathi. Ngalokho, i-Amazon yazuza ubude bayo eNayile. Kepha impikiswano isaphila futhi ososayensi abaningi basabheka umfula wase-Afrika isikhathi eside.
Kunoma ikuphi, uma esikhundleni sobude ukugeleza noma ububanzi kuthathwa njengesilinganiso, i-Amazon ihlula iNayile futhi. Ngokuqondene nowokuqala, njengoba sishilo, umfula omkhulu waseNingizimu Melika ugelezela e-Atlantic isilinganiso sama-cubic metres ayi-200 ngomzuzwana. Futhi, maqondana nobubanzi, i-Amazon ilinganisa ezigabeni zayo eziyinhloko 11 amakhilomitha. Ngamanye amagama, elinye alibonakali kusuka ogwini olulodwa.
Ngakolunye uhlangothi, njengoba senze ngeNayile, sizokukhombisa ezinye ze- izindawo ezinhle kakhulu ongabona emcengezini womfula omkhulu waseNingizimu Melika.
Amanzi amaningi athwalwa ngumfula abangela ikakhulu ukuthi amabhange awo ayikhaya lehlathi elikhulu kunawo wonke emhlabeni elibizwa I-Amazon. Kuyiphaphu langempela loMhlaba futhi line- inani elingenakulinganiswa lemvelo Kokubili ngenxa yalesi sizathu futhi ngoba inomcebo omkhulu kakhulu wezitshalo nezilwane.
Yize kuyingxenye ye- Izimangaliso Eziyisikhombisa Zemvelo ZomhlabaNgeshwa, i-ecosystem yaseAmazon ibisengozini iminyaka ngenxa yomsebenzi wezindawo eziningi zokugawula izihlahla kanye nezinye izizathu.
Iquitos, i-Amazon yasePeru
Idolobha elikhulu kunawo wonke ama-Amazon asePeru futhi likulungele ukwamukela abahambi. Ngeshwa, bekungenye yezindawo eziyinhloko zocingo Umkhuhlane wenjoloba lokho kwacekela phansi ingxenye enkulu yesifunda.
Kuyo ungavakashela amahle ICathhedral, isimangaliso se-neo-Gothic esakhiwe ekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX. Futhi i- UCasa del Fierro, uCohen noMoreykanye nendala Indlu yehhotela, isitayela esimangalisayo i-art deco. I- Isikwele Esikhulu, lapho ungabona khona i-Obelisk eya kumaQhawe.
IManaus, inhlokodolobha yama-Amazonas
Siyazivumela lokhu kudlala ngamagama yize leli dolobha, ngokusobala, lingeyona inhloko-dolobha yehlathi lase-Amazon lilonke, kodwa lisezweni laseBrazil Amazon. Eqinisweni, itholakala maphakathi nehlathi futhi igama layo liyisipho abasunguli bamaPutukezi abasenza kumaNdiya aseManaus, aqhamuka kuwo.
Isikhungo sayo sezinzwa yi Isikwele iSan Sebastian, ikuphi okuyigugu nokukhazimulayo I-Amazonas Theatre. Sikweluleka futhi ukuthi uvakashele lesi sikhungo esinomlando, esinamakhaya amaningi amahle abekiwe ngesikhathi seRubber Rush; i Imakethe ye-Adolpho Lisbon, neminyaka engaphezu kwekhulu yomlando, kanye Isikhungo Senkcubeko Yabantu Base-Amazon, umnyuziyamu obabazekayo okhuluma ngezizwe ezazihlala ehlathini elikhulu kusukela ezikhathini zasendulo.
I-Amazonas Theatre, eManaus
Belém, ukungena e-Amazon
Leli dolobha laseBrazil libhekwa njengenye yezindawo eziphambili amasango aya e-Amazon, ngoba isesizalweni somfula uqobo. Futhi iyinhloko-dolobha yesifunda saseBrazil se- I-Pará futhi inedolobha elidala eligcwele izigodlo ezinhle neminyuziyamu.
Baqhakambisa futhi I-Catedral Metropolitana, igugu lama-classic, kanye ne Inqaba yeNkosi uSanto Cristo de Presépio de Belém. Ngaphezu kwalokho, i Imakethe yeVer-o-Peso kuzokuvumela ukuthi uzicwilise empilweni yansuku zonke yedolobha kanye ne IMargal de las Garzas Park Ikhombisa amakhulukhulu ezinhlobo zezinyoni zasemanzini. Ekugcineni, ungakhohlwa ukuvakashela ifayela le- IRodrígues Alves Ingadi Yezitshalo, liphefumulelwe yiBois de Boulogne ye EParis ekubekeni kwayo, kepha ngezinhlobo zemvelo zezimbali.
Sengiphetha futhi ngibuyela empikiswaneni mayelana ne- umfula omude kunayo yonke emhlabeni, sizokutshela ukuthi, ubude ngu- INayile. Kepha, ngevolumu, i-Amazon izosiphuca isihloko. Kunoma ikuphi, bobabili banamabhange abo izimangaliso eziningi ukukunikela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Umfula omude kunayo yonke emhlabeni